China High Quality Wholesale Custom Cheap Power Off Memory Smart Plọgị tinyekwa WiFi emepụta na suppliers | OPLỌ
Nọmba nlereanya SNW-209
Gosiri Ugbu A 10A
Njikwa olu na-enweghị aka: Gosund Smart plọg na-arụ ọrụ na Alexa na Google Home Assistant, na-achịkwa ngwaọrụ ụlọ gị site na inye ha iwu olu. Nwee ahụmịhe na-enweghị aka, na-enyere aka ilekọta ndị nne, ụmụaka, ndị okenye na mmadụ niile, dịrị njikere ma gbalịa plọg smart smart ndị a.
Jikwaa Ngwaọrụ gị n'ebe ọ bụla n'oge ọ bụla: Wụnye ngwaọrụ ụlọ n'ime ụzọ ntanetị, budata ngwa Gosund, chịkwaa ha n'ebe ọ bụla na ekwentị gị. You nwere ike ịmepụta otu maka wifi nile ma gbanye ma gbanyụọ ha site na iji otu ịpị.
Ọrụ oge na dutọ oge: Mepụta oge na oge a haziri ahaziri ka ị gbanye ma ọ bụ gbanyụọ igwe eletriki ọ bụla na akụrụngwa, dịka ịkwụsị njikọta chaja na ekwentị gị zuru ezu, itinye ọkụ ịbịa na mgbede ma ọ bụ gbanyụọ mgbe ọwụwa anyanwụ na ihe ndị ọzọ. Belata oriri ike ma chekwaa ego.
Nchekwa na nke a pụrụ ịdabere na ya Smart Plug: Ngwunye plọg smart nwere ihe na usoro dị elu, dị ka V-0 ire ọkụ retardant ọkwa thermoplastics, ezigbo ọla kọpa jikọtara na PCBA dị elu, nke nwere ike izere ihe egwu ọkụ ma nye nchebe buru ibu iji chebe ezinụlọ gị.
Ntinye ngwa ngwa na ngwa ngwa: Nanị tinye ntaneti smart n'ime mgbidi ahụ, jikọọ ya na ịntanetị site na netwọk Wi-Fi (naanị 2.4Ghz), enweghị isi na ndenye aha achọrọ. Ma jiri eriri ekwentị na-ejikwa ekwentị ma ọ bụ olu gị na-ejikwa ekwentị. I nwekwara ike ịkọrọ ndị ezinụlọ gị njikwa gị ma nwee ọ ofụ nke ezigbo ụlọ ọnụ.
Nke gara aga: Factory Direct High Quality Remote Control Of Mobile App Smart nkwụnye WiFi 16Amp
Osote: High Quality N'ogbe Omenala Cheap na State-Nzaghachi Smart nkwụnye WiFi US
Factory Price Manufacturer Supplier Meter Ike ...
High Quality N'ogbe Omenala Cheap State-Feedb ...
Factory Direct Tụkwasịnụ 2 USB Ọrụ 100-250V Panel M ...
Elu àgwà N'ogbe Omenala Cheap 3 USB + 1 TYP ...